Plastic extrusion muchina, Plastiki inovhuvhuta kuumba muchina, Plastiki pelletizing inosanganisa muchina, Plastiki yekudzokorora muchina-CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Mhando muChina epurasitiki michina indasitiri.
BATAI WEDU ENGINEERER ONA ZVIMWE ZVINHU
CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.ari yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa kugadzirwa extrusion mitsetse kuti
pepa repurasitiki, ndiro, firimu, chimiro, pombi, pombi yekuumba, Pelletizing uye marara muchina.
CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.ari yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa kugadzirwa extrusion mitsetse kuti epurasitiki jira, ndiro, firimu, Profile, nyere, furidza Kuumbwa, Pelletizing uye marara muchina. Iyo kambani ine mashanu ekugadzira mabhesheni ayo ari muShanghai, Suzhou, Changzhou, Zhoushan neGuangdong. Nzvimbo yekuvaka yeChangzhou base inopfuura 266,666 mativi emamirimita, iri kuJiangsu zhongguancun tekinoroji paki, Liyang guta, mudunhu reJiangsu, mugadziri wepamusoro-soro anotsvaga mukutsvaga nekuvandudzwa kwepurasitiki yekushandisa michina; Tine R & D yepamusoro inokwanisa uye vane ruzivo mechinjiniya nemagetsi mainjiniya timu pamwe neyemberi yekugadzirisa hwaro uye yakajairika gungano shop.Our bhizinesi mweya ndeye "Kuchenjerera, Kutsungirira, Kurumidza uye Kurongeka", Kazhinji tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vatishanyire kuti tiongorore, kutungamira uye kushandira pamwe. Isu tinofara kupa rutsigiro rwakasimba!
pezvitsiga Chinese Chinese epurasitiki michini indasitiri.
Vatengi vedu vari pamusoro peChina, uye isu tine vatengi muRussia, India, Korea, Indonesia, Middle East, South America, Spain, Italy nedzimwe nyika nenzvimbo. Michina yedu inogamuchirwa zvakanaka nevatengi vedu.
ONA ZVIMWE ZVAKAWANDA Sumo
Yakakwana Pashure-Yekutengesa Sevhisi
Kwemakore, isu takateerera kune kwevatengi pre-kutengesa uye mushure-kutengesa sevhisi, ichipa vashandisi mhinduro dzinogutsa uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa.
Kuchenjerera, Kutsungirira, Kurumidza uye Kurongeka